Qaab dhismeedka ururka | PUNSAA
Dalladda daneeyayaasha aan dawliga ahayn waxa ay u dhisantahay hanaan dhiirigelinaya hufnaan iyo isla xisaabtan waxaana xubnaha hogaankeedu ku yimaadaa nidaam dimuqraadi ah oo lays doorto labadiisanaba mar, kaas oo ku cad shuruucda iyo siyaasadaha dalladda.
Golaha Guud ee PUNSAA
Golaha guud ee Dalladda oo tirada xubnihiisu gaarayaan (99) wuxuu ka koobanyahay dhamaan ergada dalladdaha ku midoobay PUNSAA. Golaha guud wuxuu go’aamiyaa siyaasadaha iyo shaqooyinka dalladda, wuxuu kaloo goluhu go’aan ka gaaraa soo jeedimaha xubnaha agaasinka.Golaha guud ee PUNSAA wuxuu kulmaa labadiisanaba mar si uu u doorto Guddoomiyaha, Guddoomiye ku xigeenka iyo xubnaha kale ee guddiga agaasinka iyo guddi hoosaadyada ayada oo loo eegayo afarta waaxood ee daneeyayaasha aan dawliga ahayn, deegaamadda iyo jinsiga. Golaha guud wuxuu ansixiyaa qorshaha wakhtiga dheer ee dalladda, warbixinnada hantidhawrka, miisaaniyad sannadeedka iyo warbixinta waxqabadka oo uu soo gudbiyo guddoomiyaha dalladda, waxaa sidoo kale goluhu dib u eegis ku sameeyaa waxyaabaha u qabsoomay dalladda ayadoo loo eegayo qorshayaashii u dagsanaa laga soo bilaabo kal fadhigii ugu danbeeyay.
Gudiga agaasinka ee PUNSAA waa mutadawiciin aan la gunnayn kuwaas oo masuul ka ah dalladda matalana danaha qaybaha kala geddisan ee ururada aan dawliga ahayn iyo daneeyayaasha kale sida bulshada iyo beesha caalamka. Xubnaha guddiga agaasinka PUNSAA waxa uu ka koobanyahay todaba iyo toban (17) xubnood oo kala ah guddoomiyaha, guddoomiye ku xigeenka, xoghayaha guud, kayd hayaha iyo xubnaha kale, waxaana 25% xubnaha guddiga agaasinka loo qoondeeyay haweenka. Balse qoondada haweenka ee xubnaha agaasinka PUNSAA ee xiligaan waa 47% haween ah iyo 53% rag ah taasoo muujinaysa in haweenku heleen xubno ka badan inta ku xusan sharciga dalladda. Xubnuha agaasinku wuxuu u qaybsanyahay afarta qaybood ee ururada aan dawliga ahayn kuwaas oo kala ah (ganacsatada, ururada bulshada rayidka ah, xirfadleyda iyo culumada diinta iyo odayaasha dhaqanka) kuwaas oo matala golaha guud kuna salaysan gobollada Puntland oo idil.
Xoghaynta dalladdu waxa ay mas’uul ka yihiin qabashada shaqooyinka maalin laha ah waxaana hogaamiya agaasimaha fulinta. Xoghayntu waxa ay ka koobantahay, Madaxa isku-duwaha mashruucyada, Madaxa Maaliyadda iyo adeega guud, madaxa uqareemista iyo dhaqaale raadinta, madaxa Maamulaha, madaxa Xiriirka, waxa ay xiriiriyaan xubnaha agaasinka, iyo daneeyayaasha caalamiga ah iyo kuwa maxalliga ah ba, ayagoo xiriir joogto ah la leh ururada iyo dalladaha si ay ugu wargeliyaan waxqabadka iyo qorshayaasha dalladda. Xoghayntu waxa ay diyaariyaan dabagalna ku sameeyaan qoraaladda iyo codsiyada mashaariicda loo gudbiyo daneeyayaasha waxaa ayna sidoo kale diyaariyaan soo jeedimaha loo gudbinayo xubnaha guddiga agaasinka.